Soosaarayaasha Nidaamka Beer dhalaalaya | Shiinaha Wershedda Nidaamka Beerka Bright
Magaca badeecada: Haanta Beerta Bright Horizontal Taangiyada biirka dhalaalaya, loo yaqaan sidoo kale taangiyada adeegga, taangiyada cabitaanka la dhammeeyay, ama taangiyada BBT ee biraha dhalaalaya. Taangiyada adeega leh dahaarka PUR waxaa lagu qaboojiyaa iyadoo la isticmaalayo biyo ama glycol oo ku dhex wareegaya gudaha soo-saareyaasha (kanaalka qaboojinta ee ku jira jaakad bir bir ah). Taangiyada dhalaalaya waa in loo farsameeyaa inay ahaadaan kuwo qabow oo culeys qabta, mararka qaarkoodna u dhaqma sidii taangiyada loo yaqaan 'BBT - Beer', taangiyada wax lagu cabbiro ee cadaadiska leh ee taangiga biraha dhalaalaya ee u adeega taangiga ...
Haanta Beer Horizontal
Taangiyada biirka ah ee loo yaqaan 'Horizontal tank', oo loo yaqaan sidoo kale taangiyada adeegga, taangiyada cabitaanka la dhammeeyey, ama taangiyada BBT ee dhalaalaya. Taangiyada adeega leh dahaarka PUR waxaa lagu qaboojiyaa iyadoo la isticmaalayo biyo ama glycol oo ku dhex wareegaya gudaha soo-saareyaasha (kanaalka qaboojinta ee ku jira jaakad bir bir ah).
Magaca badeecada: Bert Beer Tank Tank BBT, Bright Beer Tank, taangiyada cadaadiska dhululubada, taangiyada u adeega, taangiyada ugu dambeeya ee biirida, taangiyada kaydka biirka - kuwani waa shuruudaha ugu caamsan, oo ay ku jiraan isla fasalka maraakiibta cadaadiska gaarka ah ee loogu talagalay diyaarinta biirka kaarboonka dhalada ka hor, buuxinta kegs ama weelal kale. Beerka kaarboon kaarboon-ka ah ayaa laga riixaa haamaha biirka ama taangiyada cylindrically-conical ee haanta biirka keydinta cadaadiska cadaadiska ilaa baarka 3.0 ....
Darbi keli ah Taangiga biirka dhalaalaya
Taangiga keli ah ee haanta biirka dhalaalaya waxaa badanaa la dhigaa guriga qaboojiyaha / qolka qabow ee lagu lugeeyo si loo ilaaliyo heerkulka qaboojinta. Marka taangiga kaliya ee hal biir dhalaalaya uma baahna inuu ku xirnaado qaybta xakamaynta laakiin waxaa kaliya lagu qalabeeyaa cabbirka cadaadiska, taas oo fududahay in la shaqeeyo. Haddii aad leedahay qol qabow oo socod-qol qabow ah, haanta biirka dhalaalaysa ee darbiga ah ayaa kuu noqon doonta xulasho wanaagsan adiga.